Vidin-javatra: tafakatra 115 000 Ar ny lafarinina iray gony | NewsMada
Vidin-javatra: tafakatra 115 000 Ar ny lafarinina iray gony
Tsy mitsaha-mitombo ny vidin-javatra ilaina andavanandro (PPN) hafarana avy any ivelany amin’izao ankatoky ny faran’ny taona izao. Anisan’izany ny vidin’ny lafarinina sy ny siramamy.
60%! Io ny tahan’ny fisondrotan’ny vidin’ny lafarinina iray gony milanja 50 kilao, eny amin’ny mpamongady raha oharina amin’ny vidiny teo aloha. Nambaran’ny mpamongady iray eny Analamahitsy, RA, fa amidy 115 000 Ar ny vidin’ny iray gony, ankehitriny, raha 72 000 Ar tany aloha. Raha ny antsinjarany, lasa 2 500 Ar ny iray kilao raha 1 500 Ar ny teo aloha. Niakatra ihany koa ny vidin’ny siramamy hafarana avy any ivelany satria lasa 125 000 Ar ny vidin’ny iray gony (50 kgs), raha 100 000 Ar ny teo aloha.
Nihena ny haben’ny mofo
Nilaza Rafidy, mpanao mofo masaka eny Analamahitsy, fa tsy afa-manoatra izy ireo fa voatery ahena ny haben’ny mofo amidiny satria efa kely koa ny fahefa-mividin’ny mpanjifany. Any Mahajanga, nisondrotra ho 600 Ar ny vidin’ny mofodipaina raha 500 Ar teo aloha.
Tsy nihetsika kosa ny siramamy mena, vokarina eto an-toerana, satria manodidina ny 2 000 Ar ny kilao. Manodidina ny 85 000 Ar ny menaka hafarana avy any ivelany, iray bidao (20 l), amidy 4 500 Ar ny litatra.